သင် MCAT ယူဖို့ပြင်ဆင်နေဆိုရင်တော့ apps များ, စာအုပ်များ, ပြန်လည်သုံးသပ်အတန်းနှင့်ကျူရှင်ဆရာများသည်အပါအဝင်ရရှိနိုင်ပါသည်လေ့လာမှုအထောက်အကူပြု၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ သင်အလိုရှိအခါတိုင်းအတန်းသို့မဟုတ်ကျူရှင်ဆရာများသည်မတူဘဲ, သင်ပြန်လည်သုံးသပ်နိုငျသောကွောငျ့တစ်ခု MCAT app ကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သော tool ကိုဖွစျစနေိုနှင့်ထူသောလေ့လာမှုစာအုပ်တွေနဲ့မတူပဲ, app တစ်ခုသင်နှင့်အတူယူရန်လွယ်ကူသည်။
အဆိုပါ MCAT များအတွက်လေ့လာနေသင်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အတွင်းလုပျနိုငျတစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။ ဘွဲ့ရကျောင်းကစာမေးပွဲဖြေနေတဲ့အရေအတွက်ကစီမံအုပ်ချုပ်ရသော Kaplan, အဆိုအရ, သငျသညျလေ့လာနေ 300 ခန့်နာရီဖြုန်းဖို့မျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်များ၏အစည်းအရုံးတစ်ကမ်းလှမ်း ပြီးပြည့်စုံသောလေ့လာမှုလမ်းညွှန် နမူနာပြန်လည်သုံးသပ်အချိန်ဇယားနှင့်အခြားအရင်းအမြစ်များကိုအတူ။ အောက်ပါ apps များအားလုံး Apple ရဲ့ App Store ကိုနှင့် Google Play Store မှာအသုံးပြုသူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများထံမှလေးခုကြယ်များသို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုလက်ခံရရှိပါပြီ။ stand-alone လေ့လာမှုအထောက်အကူပြုအဖြစ်သို့မဟုတ်အခြား MCAT ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် တွဲဖက်. သူတို့ကိုသုံးပါ။
ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို: Ready4 Inc က
iOS နဲ့ Android: များအတွက်ရရှိနိုင်
စျေးနှုန်း: $ 149.99 (ကအခမဲ့ဗားရှင်းကိုသင်သုံးနမူနာစမ်းသပ်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏)
full-အရှည်နမူနာ MCAT စာမေးပွဲ
Princeton ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကပြင်ဆင်ထက်ပိုမို 1600 အလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကို
1000 ကျော်လေ့လာမှုစာလုံးကတ်ပေါင်း 70 ပြန်လည်သုံးသပ်သင်ခန်းစာ။
MCAT ဒေတာနှင့်အတူ 172 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်း Princeton ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်သင်သည်အခြားကျောင်းသားကျောင်းသူများအခြေအနေကောဘယ်လိုနှင့်သင်၏ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်အောင်။
အဘယ်ကြောင့်ဝယ်ပါ? Princeton ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းထက်ပိုဆယ်စုနှစ်သုံးခုများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတစ်ခုထူထောင်စမ်းသပ် prep ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီ app Princeton ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းရဲ့ MCAT ပြန်လည်သုံးသပ်ကျမ်းမှာတွေ့ရှိအတူတူပင်တိကျခိုင်မာစွာပြန်လည်သုံးသပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည်။
McGraw-Hill ကပညာရေး MCAT အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မေးခွန်းများ
ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို: gWhiz, LLC
စျေးနှုန်း: $ 9.99 (နမူနာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကန့်သတ်အရေအတွက်သည်နှင့်အတူအခမဲ့ဗားရှင်းလည်းရှိရဲ့) ။
Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ (paid version):
McGraw-Hill ကရဲ့ MCAT prep စာအုပ်တွေထဲကနေ 390 MCAT မေးခွန်းများကို
အဖြေ key မှာအသေးစိတ်ဖြေရှင်းနည်းများ
performance ခြေရာခံခြင်းသင်စမ်းသပ်အပိုင်း (စသည်တို့ကိုဓာတုဗေဒ, ဇီဝဗေဒ) ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်အောင်။
အဘယ်ကြောင့်ဝယ်ပါ? McGraw-Hill ကပညာရေးဆိုင်ရာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးနှင့်စမ်းသပ်မှု prep အရင်းအမြစ်များကိုတစ်ခုထူထောင်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app များ၏အခမဲ့ဗားရှင်း MCAT အပေါ်မျှော်လင့်သောအရာကိုများအတွက်ခံစားရဖို့အကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏, ထို paid version ကိုအတန်အသင့်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
MCAT: အလေ့အကျင့်,့Prep, စာလုံးကတ်
ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို: Varsity ကျူရှင်
အဘယ်ကြောင့်ဝယ်ပါ? Varsity ကျူရှင်တစ်ခုထူထောင်စမ်းသပ် prep ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီ app ကတော့ 2016 Appy ထူးချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားတွင်ပညာရေး app ကိုအကောင်းဆုံးအမည်ရှိခဲ့သည်။ ဒီ app ကိုပေးဆောင်ဗားရှင်းထက်ပိုမိုကန့်သတ်ပေမဲ့, က MCAT စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှအကောင်းတစ်လမ်းပါပဲ။
MCAT့Prep: MCAT စာလုံးကတ်
ယေဘုယျဓာတုဗေဒ, အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒ, ဇီဝဗေဒ, ရူပဗေဒ, စိတ်ပညာနှင့်လူမှုဗေဒ: ဤအ MCAT အမျိုးအစားဖုံးအုပ်စာလုံးကတ်နှင့်သင်၏အသိပညာစမ်းသပ်ရန်။
သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးပြုရန်နိုင်အောင်ဒီ app, လုပ်ကိုင်ရန်အင်တာနက် access ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။
"ပြန်လည်သုံးသပ်", "ကျွမ်းကျင်" သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန် "သင်ယူခြင်း" အဖြစ် Tag ကိုပြန်လည်သုံးသပ်မေးခွန်းများကို။
အဘယ်ကြောင့်ဝယ်ပါ? Magoosh စမ်းသပ် prep စာပမြေားနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးအသိအမှတ်ပြုနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app ကိုပေးဆောင်ဗားရှင်းထက်ဝေးနည်းပါးလာ features တွေရှိပါတယ်သော်လည်းအတန်းနှင့်စာသားများကဲ့သို့အခြား MCAT ပြန်လည်သုံးသပ်ရွေးချယ်စရာဖို့ကောင်းတစ်ဦးအဖြည့်သည်။
Kaplan အားဖြင့် MCAT စာလုံးကတ်
အခမဲ့ app ကိုနှင့်အတူ 50 ပြန်လည်သုံးသပ်စာလုံးကတ် Get, ဒါမှမဟုတ် 1000 ကျော်ကတ်များမှဝင်ရောက်ခွင့်အဘို့သင့် Kaplan အကောင့်ကို log ။
အဘယ်ကြောင့်ဝယ်ပါ? သငျသညျပြီးသားတစ်ဦး Kaplan စမ်းသပ် prep ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းအတွက်စာရင်းသွင်းနေတယ်ဆိုရင်, ဒီဟာအကောင်းဆုံးလေ့လာမှုအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ Kaplan ကိုလည်းစမ်းသပ် prep စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒီ app ကို Google Play စတိုးမှာလေး-ကြယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရရှိသွားတဲ့စဉ်က Apple က App Store ကိုမှာနိမ့်ရမှတ်များရှိကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်ပါတယ်။
မဆိုအကြောင်းအရာသည်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းကျုရှင် Options ကို 3
ငါရဲတပ်ဖွဲ့အကြှနျုပျ၏ ID ကိုပြရန်မှဖူးသလား?
သငျသညျ Poker Chips ကိုဝယ်ခင်မှာ
စာအုပ်ကလပ်ဆွေးနွေးချက်မေးခွန်းလွှာ - Yann Martel အားဖြင့် '' Pi ၏ဘဝအသက်တာ ''
ရီပတ်ဘလီကန်ဆင်နှင့်ဒီမိုကရက်ပါတီမြည်း မှစ. လာအဘယ်မှာရှိ
စပိန်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဗမာတွင်ပုံစံတူနှင့် Difference ပုံစံများ
မိခင်က Character Monologues
သုတ်ဆေးအမျိုးအစားကဘာလဲတဲ့ RC Paint မှသုံးပါသလား?
သင့်ရဲ့တက္ကသိုလ် Wisconsin ပြည်နယ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖော်ပြချက် Ace လုပ်နည်း
Pai Gow Poker မဟာဗျူဟာ
Bernardo O'Higgins ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Foursquare ခရစ်ဝင်ကျမ်း: ဒါဟာအဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး